Gadzirira Chomukati Yekuvhura Mharidzo Yemazororo
Yakatumirwa ne Tranquillus | 14 Sea, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Zvese zvakagadzirira kumba, mumazuva mashoma iwe unoenda kuzororo. Wakatora stock nevamwe vako pakurapa kwemafaira akakosha. Izvi zvinogona kunge zvisina kukwana. Vanoshanda navo kana vatengi vanogona kukubata vanofanirwa kuziviswa nezve kusavapo kwako.
Kuti utumire zvakare mufananidzo wekukomba uye hunyanzvi, ndinokupa zano kuti ushande pakugadzirira kweshoko re otomatiki kusavapo.IYO mubvunzo yekuratidza kusavapo kwako mune meseji panguva imwechete pfupi uye chaiyo. Unogona kugadzirira, kana mameseji ako imwe meseji yevaunoshanda navo uye imwe kune vatengi vako inotendera. Kana kuti ingova meseji yakajairika kune chero ani mukati kana kunze kwekambani yako.
Zvekugadziridzwa: rwendo rwemaminitsi mashanu paYouTube.
Pano kune vashandisi vemataridzikiro uye kune avo kwe Gmail.
Mienzaniso yekusavapo mameseji yakanyorwa mune yakajairika maitiro
Rangarira kuti uyu mushoko rine ruzivo uye kuti nekudaro rinofanira kujekesa huwandu hwenhaurwa.
Mazuva ekutanga nemagumo emaholide ako.
Taura kana iwe uine mukana wekutumira ako mameseji panguva ino.
Kana zvichikwanisika, sanganisira zita remunhu iyeye kuti abate kana paine emergency.
Uye zvipedze nechiratidzo chako chemagetsi kana rako rekutanga uye rekupedzisira zita.
Mafomu mafomu haana kudikanwa kune urwu rudzi rwemharidzo. Zviri kwauri, zvichienderana nemamiriro ari, kana iwe uchida kuzvisanganisira.
Otomatiki kusavapo meseji: modhi nhamba 1
Ndatambira meseji yako! Ini pari zvino ndiri kuzororo uye ndichadzoka paDD / MM / YYYY.
Ndichafara kukupindura kana ndadzoka.
Kana kupindira kwake kuchidikanwa, wandinoshanda naye (Zita rekutanga ZITA + kero tsamba) zviri kwauri.
Yako siginicha yemagetsi.
Otomatiki kusavapo meseji: modhi nhamba 2
Ini handipo kuzororo rangu kubva kuDD / MM / YYYY kuenda kuDD / MM / YYYY.
Ini ndichatora hanya neshoko rako uye ndinokurumidza kupindura kwaro pachangu pandinodzoka.
Nekudaro, shamwari yangu Mr. (Chekutanga zita RAKADZIMA ZITA) achakuchengeta iwe munjodzi.
Otomatiki kusavapo meseji: modhi nhamba 3
Ndatenda neshoko renyu.
Ini handipo kubva kuDD / MM / YYYY kuenda kuDD / MM / YYYY uye iwe unozopindura nekukurumidza kana ndadzoka.
Kana zvichidiwa, Mr. (Chekutanga zita NAME) vachakuchengeta nesimba.
Otomatiki kusavapo meseji: modhi nhamba 4
Ndatenda nekubata neni! Ini handipo kubva kuDD / MM / YYYY kuenda kuDD / MM / YYYY kunosanganisirwa.
Nezvikonzero zvekuvanzika, ini handina mukana kune maemail angu panguva ino.
Ehe une mukana kana mamiriro acho achida kuti ubate Mr. (Chekutanga zita NAME) uyo achakupindura nekukurumidza.
Chekutanga zita NAME
Otomatiki kusavapo meseji: modhi nhamba 5
Yako meseji yakachengetwa.
Yakakwana kubva kuDD / MM / YYYY hofisi kuenda kuDD / MM / YYYY Ndichagadzirisa email yako pandinodzoka.
Kana muchida kudiwa nekukurumidza, ndapota bvunza Mr. (Chekutanga zita RAKADZIMA Zita + email kero).
Gadzirira Chomukati Yekuvhura Mharidzo Yemazororo May 13th, 2020Tranquillus
pashureTonga bhokisi rako retsamba zvakanaka
zvinoteveraNdiani anogona kubatsirwa nebasa rekumira rine chekuita nekuvharwa kwezvikoro? Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waripiwa, chii chinzvimbo uye nguva yekuripirwa?